मगरबस्ती – मगरबस्ती
‘रेडियो तरंग हानिकारक छैन’
Posted byMagar Basti 17th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on फाइभ–जी प्रविधि स्वास्थ्यका लागि जोखिम नै हो त?
व्यस्त जीवनशैली र सही खानपान नहुनुको असर प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी रोग, मोटोपना र डायबिटिजका साथै मिर्गौलासम्बन्धी समस्या पनि तिव्र रुपमा बढिरहेको छ ।
मिर्गौला स्वस्थ राख्न आवश्यक मानिन्छ रेनल डाइट ।
के हो रेनल डाइट ?
रेनल डाइट यस्तो खाना हो, जसमा सोडियम, फस्फोरस र प्रोटिनको मात्रा केही कम हुन्छ । यस डाइटले रगतमा विकार तत्वको मात्रा कम गर्छ, जसले मिर्गौलाको भार घटाउँछ, र मिर्गौला स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
खानामा यी तीन चिज कटौती गर्दा तपाईंको खाना रेनल डाइट बन्न सक्छ–
नुनमा प्रचुर मात्रामा सोडियम पाइन्छ । सोडियम शरीरका लागि आवश्यक तत्व हो, तर यसको बढी मात्रा मिर्गौलाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।
प्रायः नेपालीको भान्सामा नुनको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी नै हुन्छ । त्यसैले, मिर्गौलाको सुरक्षाका लागि खानामा नुनको मात्रा घटाउनु आवश्यक छ । यसले मिर्गौलासम्बन्धी अधिकांश रोगको जोखिम घटाउँछ ।
स्वादका लागि नुनको सट्टा भिनेगार, कागती, टिमुरजस्ता विकल्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रोसेस्ड र जंक फुड
प्रशोधित र प्याकेटमा राखिएका खाद्यपदार्थ (प्रोसेस्ड र जंक फुड) मिर्गौलाका लागि हानिकारक हुन्छन् । यी खाद्यपदार्थको सेवन गर्न छोड्नु मिर्गौलासम्बन्धी स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण कदम हो ।
प्रचुर मात्रामा पोटासियम हुने खाद्यवस्तु
शरीरका लागि पोटासियम निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । तर, यसको मात्रा आवश्यकताभन्दा माथि हुनु भने राम्रो होइन ।
जब मिर्गौला सही ढंगले काम गर्दैन, रगतमा पोटासियमको मात्रा बढ्छ । यसबाट मुटुको धड्कनमा असर पर्छ, र हृदयघातको सम्भावना बढ्छ ।
त्यसैले, प्रचुर मात्रामा पोटासियम पाइने केरा, सुन्तला, जुनार, आलु, ब्रोकाउली, बन्दा, च्याउ, काजु, बदाम, सखरखण्ड, आँपजस्ता खाद्यवस्तु ज्यादा सेवन मिर्गौलाका लागि जोखिम बन्न सक्छ ।
Posted byMagar Basti 16th Jul 2019 16th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on तीन चिज मिर्गौला जाेगाउन हामीले छाड्नैपर्छ !
काँक्रेविहारमा घोडा सफारी सुरू
सुर्खेत । सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीयस्थल काँक्रेविहारमा घोडा सफारी सुरू गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ को कार्यालयले काँक्रेविहार क्षेत्र अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सुविधाका लागि घोडा सफारीको व्यवस्था गरेको हो ।
काँक्रेविहार नेपालकै पहिलो संरक्षित वन क्षेत्र हो । यहाँ वर्षौं पुराना ढुङ्गाबाट बनेका कलात्मक मूर्तीहरुको अवलोकन गर्न पाइन्छ । तीनै मूर्तीहरु जोडेर पुरातत्व विभागले शिखर शैलीको मन्दिर निर्माण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
घोडा सवार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले काँक्रेविहारमा घोडा सफारीका कारण पर्यटकको आगमन बढ्ने दाबी गरे । उनले भने, “स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काँक्रेविहारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्नुपर्दछ ।”, “घोडा सफारी कार्यक्रम पर्यटकहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घोडा व्यवस्थापन समितिले इमान्दारीपूर्वक पर्यटकहरुको सेवामा लाग्नुपर्छ ।”
वीरेन्द्रनगर–९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले ऐतिहासिक संरक्षित वन काँक्रेविहारमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न हाल दुई वटा घोडाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । “अहिले पर्यटकहरुले काँक्रेविहारको भग्नावशेष मात्र हेरेर फर्कने गरेका छन्, अब घोडामार्फत जङ्गल सफारी पनि गर्न सक्नेछन्”, उनले भने । – रासस
Posted byMagar Basti 16th Jul 2019 16th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on काँक्रेविहारमा घोडा सफारी सुरू
ज्यानै लिने एपेन्डिक्स कसरी हुन्छ ? लक्षण र बच्ने उपाय
जहाँ एपेन्डिक्स छ । यस्तो समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकसितको सल्लाह लिनुपर्छ । श्रोत – जननी नेपाल
Posted byMagar Basti 13th Jul 2019 13th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ज्यानै लिने एपेन्डिक्स कसरी हुन्छ ? लक्षण र बच्ने उपाय
इनरुवा, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, हरिनगर, गढी, कोसी, बर्जु र देवानगन्ज गाउँपालिकाका जलमग्न भएका छन् ।
बाढी प्रभावितहरुले बसोबासका लागि सुरक्षित स्थान र उचित सहयोगको माग गरेका छन् ।
Posted byMagar Basti 13th Jul 2019 13th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सुनसरीमा ८१५ घर डुबानमा, ३२५ घरपरिवार विस्थापित
यस्तै लम्जुङ–मनाङ सडकमा पनि गाडी चल्न सकेका छैनन् । यस्तै कलैया–वीरगञ्ज सडक खण्डको नौतन गण्डक, प्रसौनी र भलुहीमा सडकमा पानी जमेकाले गाडी नचलेका प्रहरीले जनाएको छ
Posted byMagar Basti 13th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on देशैभर बाढी र पहिरोको कहर : १७ जनाको ज्यान गयो, ७ बेपत्ता
रौतहट डुब्दा भारतको बिरोध #GO BACK INDIA
२८ असार, रौतहट । भारतीय बाँधमा भएका पानी थुन्ने ढोकाहरु भारतीय पक्षले नखोलिँदा रौतहट सदरमुकाम गौरका बस्ती संकटमा परेका छन् ।
पानी थुनेर छिमेकी मार्न खोजेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा भारतको बिरोध भैरहेको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताले भारत विरोधी स्टाटससँगै ‘गो ब्याक इन्डिया’ ह्यासट्याग पनि प्रयोग गरेका छन् ।
सिडियो भन्छन्- पटक-पटक आग्रह गरें
Posted byMagar Basti 13th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on रौतहट डुब्दा भारतको बिरोध #GO BACK INDIA
संकता देवीको दर्शन गर्नु होस र आजको राशि पढ्नुहोस्
वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सकिने भए पनि आम्दानी गर्न केही समय कुर्नु नै पर्नेछ । पढाई लखोईमा प्रतिस्पर्धीहरूको अवरोधले पछि परिनेछ । आफन्त तथा जीवन साथी सँग मनमुटाब सिर्जना हुने सम्भावना रहेको छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेममा मनमुटाब सिर्जना हुने तथा अग्रज सँग राज बजिनेछ । सोख तथा विलासिताले खर्च बढाउनेछ भने आम्दानी कम हुनेछ । असम्भव व्यवहारले समस्या निम्त्याउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आलस्य तथा अस्वस्थताले लक्ष्यमा विलम्ब हुनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) बन्द व्यापारबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ भने नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर आउनेछ । तपाईँको कुरा काट्ने तथा विरोध गर्नेहरू तपाइकै प्रशंसा गर्न थाल्नेछन् । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै जित हात पार्न सकिनेछ । मुद्दा मामिला तथा न्यायिक निर्णयहरू तपाइकै पक्षमा फैसला हुनेछन् । शरीर स्वास्थ्य रहने हुनाले राम्रा काम गरी दाम कमाउन सकिनेछ । पढाई लेखाइमा राम्रो नतिजा काम साथ तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) व्यवसाय तथा काम गर्ने वातावरण बन्ने हुनाले आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनेछ । आफन्त तथा सन्तानबाट तपाईँको काममा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ । बौद्धिकताको प्रयोग गरी नाम तथा दाम कमाउन सकिनेछ । नयाँ बिचार दिमागमा आउने हुनाले प्रबृधिको प्रयोग गरी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । प्रेममा सफलता मिल्नेछ । पढाइकै सिलसिलामा यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) उद्योग तथा उत्पादन मूलक व्यवसायमा लागानि गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । छोटो दुरीको उपलब्धि मूलक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने व्यापारमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । दाजुभाइ तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ । पुराना विवादित विषयहरू हल भएर जानेछन् । नाफामूलक व्यवसाय भन्दा सेवामूलक व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) असजिलो परिस्थितिहरूलाई बुद्धिमत्ता पूर्वक सहजतामा ढाल्न सकिनेछ । माया प्रेमको गाँठो कसिलो हुनेछ भने जीवन साथीको सहयोगले उत्पादन मूलक काम गर्न सकिनेछ । पारिवारि सभा समारोहका सहभागी भई मिठो ओसिलो भोजन ग्रहण गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ । कलाकारिता तथा फिल्मी क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुलो नाम तथा दाम दुवै कमाउने ग्रहयोग रहेको छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा बिक्री घट्न सक्छ भने विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या देखा पर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अल्छी गर्नेबानिले कामहरू बिग्रन सक्छ । अनावश्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय ब्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिनेछैन । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) आफन्त तथा दाजुभाइसँग सामान्य कुरामा राज बजिनेछ भने संयमित नभए अप्रिय भर्ना घट्न सक्छ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ । आफूलाई सहयोग परेको बेला सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन् । पढाई लेखाइमा प्रशस्त समय खर्चिएपनि भनेजस्तो नतिजा आउनेछैन । लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खनु नै उचित हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ भने सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । सन्तानको सुखमा मन रमाउनेछ भने आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा समय खर्चनु पर्दा मन प्रसन्न रहनेछ । अध्ययन अध्यापन तथा खोज मूलक क्षेत्रमा सफलता हात पार्न सकिनेछ भने राज्यबाट सम्मान हुने ग्रहयोग रहेको छ । प्रेमका बाटाहरू फराकिला हुनेछन् भने जीवन साथीको पनि सहयोग पाइने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ ।
Posted byMagar Basti 13th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on संकता देवीको दर्शन गर्नु होस र आजको राशि पढ्नुहोस्
काठमाडौं । विराटनगर तरकारी र फलफूल बोकेका भारतीय ट्रक विषादी परीक्षण नगरी नेपाल भित्रन थालेका छन् । प्रदेश १ का तीन नाका (झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर र सुन सरीको भन्टाबारी) बाट सयौंको संख्यामा तर कारी र फलफूल बोकेका ट्रक नेपाल छिरेका हुन् ।काँकडभिट्टा नाकाबाट मंगलबारसम्ममा ९० को संख्यामा यस्ता ट्रक भित्रिएका छन् भने विराटनगर र भन्टाबारी नाकाबाट पनि उत्तिकै संख्यामा तरकारी र फलफूल बोकेका ट्रक नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जनाएका छन् । सरकारबाट विषादी मापन रोकेको पत्र भन्सारमा सोमबार बिहान आइपुगेकाले तरकारी र फलफूल बिना परीक्षण भित्रिन थालेको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख टेकबहादुर अर्यालले बताए ।प्रदेश १ मा तरकारी र फलफूल सबैभन्दा बढी भित्रिने झापाको काँकडभिट्टा नाका हो । यस्तै विराटनगर भन्सारबाट पनि सोमबारदेखि पूर्ववत् रुपमा तरकारी र फलफूल बोकेका भारतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। काँकडभिट्टा नाकाबाट भित्रिएका फलफूल र तर कारी बिर्तामोडस्थित कृषि थोकबजार हुँदै देशका विभिन्न सहरमा पुर्‍याइन्छन् भने विराटनगर भन्सारबाट भित्रिएको विराटनगरस्थित गुद्री बजारसहित विभिन्न स्थानमा पैठारी हुन्छ ।संघीय सरकारले असार २ मा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित ग‍रेको थियो। असार १० गतेदेखि प्रदेश १ का सीमा नाकाबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादीको मात्रा परीक्षण सुरु भएको थियो । लगत्तै विराटनगर र काँकडभिट्टास्थित मेची भन्सारमा तरकारी तथा फलफूल बोकेका ट्रकको लाइन लाग्न सुरु भएको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Posted byMagar Basti 11th Jul 2019 11th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on विषादी परीक्षण नगरी फलफूल र तरकारी बोकेका भारतीय ट्रक धमाधम भित्रिन थाले
Posted byMagar Basti 11th Jul 2019 11th Jul 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on खुसीको खबर सक्दो सेयर गरौं “फिर्ता हुने भयो सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली जमिन” यसरी भयो बेलायती मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
मगरबस्ती, Proudly powered by WordPress.